Bacela uxhaso abaqale ama-aerobics | News24
Bacela uxhaso abaqale ama-aerobics
isithombe: lethiwe makhanyaAmalungu omphakathi ajoyine iqembu lokujima.
ABAHLALI baseMbali Unit J sebeqale uhlelo lokujima ama-aerobics ngenhloso yokugcina imizimba yabo iphilile nokuthi bengangenwayizifo kalula.
Ngokusho kuka Nkk Vamisile Mkhize nongomunye wabasunguli balolu hlelo lokujima uthe bahlangana kusuka ngoMsombulo kuya kuLwesihlanu ligamenxe ihora lesine (4.30 pm) kuya ekugamanxeni kwehora lesihlanu (5.30 pm).
Elandisa i-Echo uthe ungumuntu okuthandayo ukuzivocavoca yingakho benqume ukuthi basukume belekelele umphakathi othanda ukuzivocavoca.
“Sibonile ukuthi kungaba into enhle ukuthi sifake wonke amalungu omphakathi ukuthi kulolu hlelo. Akukhathalekile ukuthi uneminyaka emingaki ngoba samukela wonke umuntu. Lokhu kuzosisiza kakhulu thina banatu besifazane ikakhulukazi intsha ukuthi iziqhelelanise nezinto ezingalungile ezifana nokuphuza utshwala nokukhulelwa okungahleliwe. Izophinde isisize futhi ekutheni sihlale sinempilo sibe yimiqemane singangenwa izifo kalula ,” kubeka yena.
Uthe lolu hlelo baluqale ezinyangeni ezintathu ezedlule kanti selokhu beqalile lukhombisa ukukhula kakhulu.
“Ngesikhathi siqala sasinabantu abangama-20 kuphela, kodwa manje sicishe sibe ngama-40. Abantu bayakuthokozela kakhulu lolu hlobo lokuzivocavoca ngoba bathola ithuba lokuzivocava bephinde bezijabulise ngesikhathi esisodwa ngenxa yomculo osuke udlala. Inkinga esinayo nje wukuthi sishoda ngezinto zokujima yingakho sicela noma ubani ongasisiza ukuba afake isandla ukuze nathi sithuthuke.
Okwamanje sinomuntu osilekelelayo nosifundisayo, kodwa nathi siyafuna ukukhula sifunde nezinye izindlela ezahlukene zokuzivocavoca,” kubeka yena.
UNkk Mkhize uthe noma ubani ophuma kweyiphi indawo uvumelekile ukuza azojoyina iqembu labo lokuzivocavoca.
UNks Fezeka Dladla ojoyine lolu hlelo uthe: “Thina bantu besifazane saziwa kakhulu njengabantu abakhulu ngemizimba lolu hlelo luzosisiza kakhulu ekutheni sikwazi ukugcina imizimba yethu inempilo futhi iyilento esiyifunayo. Ngijabule kakhulu mina ukuthi sinohlelo olufana nalolu.”
UNks Senzeni Ngcobo naye uthe kuyamjabulisa ukuthi sekunohlelo olufana nalolu wathi uyafisa sengathi lungaqhubekela phambili.